Efa manana ny famandrihan'ny Adobe Illustrator ho an'ny iPad ao amin'ny App Store | Famoronana an-tserasera
Afaka manafatra mialoha an'i Adobe Illustrator ho an'ny iPad avy amin'ny Apple App Store ianao izao
Ny fahatongavan'i Adobe Illustrator ho an'ny iPad ary saika azontsika atao ny milaza fa efa eto izy io, farafaharatsiny ny famandrihany anao mba hipetrahanao amin'ny pejiny ao amin'ny Apple App Store ary azonao atao ny miomana amin'ny andro izay azon'ny besinimaro atolotra.
Fahafahana mamorona ampahany amin'ny Fanandramana momba ny biraon'ny Illustrator amin'ny iPad ary betsaka kokoa raha azo atao ao amin'ireo vaovao nambara. Raha ny voalaza dia maimaim-poana ny fampiharana, na dia tsy maintsy manana kaonty Creative Cloud miaraka amin'ny fidirana amin'ilay Illustrator lehibe ao amin'ny PC-nao aza ianao.
Adobe Illustrator dia tonga mba hanatevin-daharana ny zavatra niainan'ny iPad miaraka amin'ny Apple Pencil ary hametraka ny tenany ho fitaovana famolavolana lehibe ho an'ireo matihanina sy ireo izay te handentika ny sary hosodoko nomerika.
Fampiharana vaovao ho an'ny mpihazona iPad iray izay avy amin'ny vokatry ny asan'ireo taona ireo izay nifandraisan'i Adobe tamin'ny fifandraisana mivantana tamin'ny mpamorona sy ny matihanina mba handraisana ny valiny ilaina hanatsarana ny Illustrator amin'ny takelaka Apple.
Raha ny marina dia manana maromaro isika ohatra amin'ny asa vita amin'ny fampiharana Illustrator amin'ny iPad ary inona no azon'ity rindranasa ity ahatongavana betsaka hanantena fatratra hanandrana azy ireo amin'ny takelaka. Ho hitantsika eo rehefa hanapa-kevitra ny hanomana azy ho an'ny Windows i Adobe manana Adobe Fresco amin'ny PC rehetra misy Windows 10 izahay ary ankafizo amin'izay ireo andiana borosy izay mamerina ireo tena izy.
Izany hoe, araky ny tsindry ataontsika dia afaka manasa fanasan-damba sy teknika andiana teknika hafa isika hanamboarana borosy sy volombava. Miandry izao Navoaka tamin'ny famoahana farany ny Illustrator for the iPad ka azo sintonina avy amin'ny Apple App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Afaka manafatra mialoha an'i Adobe Illustrator ho an'ny iPad avy amin'ny Apple App Store ianao izao
Adobe manavao ny Premiere Pro sy After Effects miaraka amin'ireo vaovao ireo